Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo xadhiga ka jaray warshad Milixda sifayn doonta. – Samawadenews
Wareysi: Dr. Maxamed Gaboose, Qaybtii 4aad.
Madaxweyne Muuse Biixi oo booqday qaar ka mida Xafiisyada Dowladda.
Xeer Ilaaliyaha Jubbaland oo Digniin ka soo saaray Falalka Kufsiga ah ee Dumarka loo gaysto.
Madaxweyne Farmaajo oo codsi u diray Golaha Shacabka ee JFS.
Maxaa ka jira in Khilaaf soo kala dhexgalay Wasiir Maxamed Kaahin & Muuse Biixi.
Xisbiga Waddani oo dacwad ka gudbinaya Taliye Ciidan.
Ra’iisal Wasaare Rooble oo magacaabay Golihiisa Wasiirada.
Iskaashatada Gaadiidka G. Banaadir oo la kala diray kadib markii lagu Eedeeyey la shaqaynta Argagixisada.
Dalalka Baxrayn iyo Israa’iil oo heshiis Diblomaasi kala saxeexday.
Dagaal Maalintii 4aad dhexmaraya Ciidamada Dowladda iyo Alshabaab.
Taliyaha Ciidanka Booliska “Majirto Waddo xiran Gudaha magaalada Muqdisho”
Xisbiga Waddani oo dhaliilay waxqabadka Xukuumada Kulmiye.
Madaxweynaha S.land oo ka hadlay Falkii Dilka ahaa ee dhawaan ka dhacay Burco.
Qarax ka dhacay Dalka Afgaanistaan oo lala beegsaday Xarun Boolis.
Madaxweyne Siciid Deni oo Garoowe dib ugu laabtay.
Madax dhaqameed iyo waxgarad tegey magaalada Jowhar.
Ehelada Gabadhii lagu kufsaday Xarunta Agoomaha Hargeysa “Maxamed Siyaad wixii laga sheegtay miyaanay Cadaalad daradaa ahayn”
Siyaasi Yacquub Xuseen oo ka faalooday hadal ka soo yeedhay C/naasir Buuni.
Saraakiil ka tirsan Midowga Yurub oo maanta kormeeray xabsiga dhexe ee Muqdisho.
Xukuumada Soomaaliya oo ka hadashay Cilada Internetka ee qaybo ka mid ah Dalka.
Cismaan Kujare “C/naasir waa laga danbeeyaa, xisbiga kulmiye kama tirsana, Madaxweyne ma’aha”
Macalin Aflagaadeeyey Nebi Maxamed (CSW) oo lagu gawracay Dalka Faransiiska.
Ra’iisal Wasaare Rooble oo Qoraal xasuusin ah u kala diray Madaxda Maamul-Gobaleedyada.
Xukuumada Soomaaliya iyo Talyaaniga oo kala saxiixday Mashruuc lagu dhisayo Biyo-xidheenka Beledweyn.
Badhasaabka G. Sanaag Eng. Axmed Cismaan oo ka hadlay Safar uu ku joogay magaalada Hargaysa.
Burco: Sheekh si adag uga hadlay Dad uu sheegay inay faafinayaan Diimo kale.
Taliska Xooga Dalka oo shaaciyey magacyada Saraakiil Alshabaab ah lagu dilay.
Guddoomiyaha G. Sanaag oo kormeeray Dhismaha Wadada Ceerigaabo & Burco.
Somaliland oo xubin ku yeelatay Hay’adda Batroolka Soomaaliya.
Xukuumada Soomaaliya & Qaramada Midoobay oo kala saxiixday Heshiis Iskaashi ah.
Ku simaha Madaxweynaha Khaatumo “Wadahadalo Danbe lama galayno S.land”
Axmed F. Idaajaa “Taariikhda Warbaahinta Soomaaliya iyo Eray bixinta Afka-Hooyo.
Guddoomiyaha Shaqaalaha oo ka hadlay Eedayn uga timid Xisbiga Waddani.
Cali Maxamed Geedi “Siyaasiinta ku fekeraya inay Duubab iyo Nabadoono Macmal ah sameeyaan”
Xisbiga Waddani oo shaaciyey shaqaale ka tirsan Madaxtooyada oo lagu daray Golaha Dhexe ee Kulmiye.
Ra’iisal Wasaaraha oo xadhiga ka jaray Dib u dhiska Wasaaradda Beeraha.
Ra’iisal Wasaare Rooble oo ka qaybgalay kulan loogu ducaynayay Shuhadadii 14ka Oktoobar.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo xadhiga ka jaray warshad Milixda sifayn doonta.
Golaha Wasiirada SL oo ansixiyey Laba Xeer
Odayaasha dhaqanka ee ka yimid Shanta Somaliyed oo ka hadlay weerarkii SYL Hotel.
Nin lagu eedeeyey inuu Tababaro Alshabaab, madaxiisana la dul dhigay $5Milyan qofkii soo sheega meesha uu joogo. (Jehad Serwan Mustafa)
California. Dowladda Maraykanka ayaa waxay sheegtay in nin magaciisua lagu sheegay Jehad Serwan Mustafa, da’diisu tahay 37 jir, kuna koray magaalada Sera Mesa oo ka tirsan San-Diego ee dalka maraykanka … Read More
Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Somalia oo ku Baaqay in la Adkeeyo Ammaanka si ay u Dhacdo Doorasho.
13 Askarta Faransiiska oo ku geeriyootay shil laba helicopter oo isku dhacay ayagoo hawada ku jira dalka Mali.
Mali. 13 qof oo ka tirsan askarta Faransiiska ayaa xalay ku dhintay dalka Mali, kadib markay isku dhaceen 2 Helicopter oo ay lahaayeen ciidamada Faransiiska. Ciidamadan oo la dagaalamayey waxay … Read More
Asr 2:18 PM
Isha 6:34 PM
[Al-A’raf (the Heights): 189]